ISilo sibonge ukubambisanangesikhathi ebesinzima kuZulu - Ilanga News
Home Izindaba ISilo sibonge ukubambisanangesikhathi ebesinzima kuZulu
ISilo sibonge ukubambisanangesikhathi ebesinzima kuZulu
“NGICELA ukuthi sizwe sikaZulu ngiphakamise ukujabula okukhulu ngokubambisana engikubone kuwo wonke lo nyaka owedlule. Noma izinto bezinzima kodwa siqikelelile futhi sakuphikelela ukuthi imicimbi yesizwe kayizukuma ngoba njengokuchaza kweSilo esidala ukuthi yonke le micimbi njengoba yenziwa akusikho ukuthi kwenziwelwa ubumnandi nje bodwa kuphela, kodwa iwumkhuleko kaZulu.” Lawa ngamazwi eSilo samaZulu uMisuZulu kaZwelithini awasho enkulumeni yakhe ayethule eMkhosini Wamaganu obusesigodlweni eMachobeni, eNgwavuma ngoMgqibelo.
Ngemuva kokukhothama kweSilo uZwelithini kaBhekuzulu, eminye imicimbi yeSizwe yenzeke ngaphansi kwezimo ezinzima ngenxa yokuthi uhulumeni wesifundazwe wanquma ukulumisa uxhaso ngenxa yombango wobukhosi obukhona eNdlunkulu. INdlunkulu yaze yazama ukuqhamuka nohlelo lokuba kuvulwe i-akhawunti yasebhange ukuthi kuqoqwe iminikelo yokuxhasa eminye imisebenzi eqondene nesizwe, njengayo imicimbi. Sikhuluma ngalo mkhosi obugujwa, iSilo sithe usifikisela ngemizwa eminingana.
“Ngiyazi ukuthi kule minyaka emibili eyedlule kwakume uMdlokombana, uVuk’ udlamadoda lapho engimi khona namhlanje, esasingazi ukuthi isizwe emuva konyaka siyokwehlelwa wubuhlungu obungachazeki,” kusho iSilo. Siqhube sathi: “…ngiyaqikelela nina beSilo ukuhamba kobumbano nokuzwana. Ngiyazi ukuthi kuningi obekuniphatha kabi kulezi zinyanga eziningi ezedlule ngenxa yokudideka emndenini wobukhosi bukaZulu, nangokungaboni mhlawumbe ngaso linye.
“Kodwa siyambonga uNkulunkulu goba lokhu engake ngakusho siseKhenani, la engangibizwe khona wuNyazi Lwezulu, ukuthi yebo izinkulumo zingakhona kanti futhi nesizwe bangazama ukusidukisa, kodwa amanga ngeke amelane neqiniso.” UNdunankulu wesifundazwe uMnu Sihle Zikalala ethula inkulumo kulo mcimbi, uthe uqinisekise isizwe ukuthi bewuhulumeni wesifundazwe bayayihlonipha iNdlunkulu kaZulu. “Silo samaBandla, wena weNdlovu, siyafisa ukuhalalisa, sinxuse futhi ukuthi sonke masiqhubeke sisebenzele ubumbano lwesizwe samaZulu.
“Siqinisekise ukuthi kuba khona ukubuyisana nokubambisana ngoba uBhejan’ ephuma esiqiwini ubekugcizelela ukuthi ubunye buyisisekelo sesizwe, futhi thina uma siwuZulu sibumbene, siyakwazi ukwenza igalelo elibonakalayo eNingizimu Afrika iyonke. “Njengohulumeni waKwaZulu-Natal, siyihlonipha kakhulu iNdlunkulu. Siyafisa ukuthi ukubuyisana nokubambisana kubuye kubekhona ngokushesha, ukuze siqhubeke nemicimbi yonke eyakha isizwe. “Le micimbi akuyona imicimbi yaseNdlunkulu nje, kodwa yimicimbi yesizwe.
Iyasilekelela ekutheni abantwana bakwazi ukuzigqaja ngobubona, nathi njengabantu baKwaZulu sizigqaje ngamasiko nemvelaphi yethu. “Futhi iyakhuthaza lokho esithi ukuphilisana kwabantu abanamasiko ahlukene. Yingakho kuthe uma iNdlunkulu isithinta, yathinta nabezeMvelo (EKZN Wildlife), idinga ukuthi kube khona izilwane esizilethayo, siye sathi asizilethe ukuze umcimbi wesilo uqhubeke kahle.” Uqhube wathi: “Silo esikhulu, ukugubha lolu suku olubaluleke kangaka kusihlaba umxhwele njengabantu baKwaZulu-Natal, nohulumeni.
“Kuyasijabulisa ukubona okaNdaba eqhubeka ezinyathelweni zikaBhejan’ ephuma esiqiwini, ngokunjalo noMntanenkosi iNdlovukazi. “Siyafisa ukubonga ukuthi iSilo asiyekelelanga ukuthi lo mcimbi ushabalale, kodwa siqinisekisile ukuthi uyaqhubeka ngoba ngomunye wemicimbi ebaluleke kakhulu esizweni. Awubalulekile nje esizweni salapha KwaZulu naKwaZulu-Natal, kOdwa uma kuyokhulunywa
iqiniso wumcimbi ogujwa e-Afrika eseMzansi yonke.” Ephawula ngobumqoka balo mkhosi uthe njengoba kuwumkhosi owenzeka MeSwazini kanye nase Mozambique, udala ukuxhumana nokuhambelana kwabantu bakula mazwe angomakhelwane. “Amaganu akudingi sibawuke ngeso lokuwaphuza kuphela, kodwa ayasilekelela ngemicimbi enje ekhulisa ezokuvakasha.
“Kodwa ngaphezu kwalokho kumele siwakhulise, atshalwe, sikwazi ukuthi siwakhiqize, abe wumkhiqizo wethu njengesizwe, ikakhulukazi kule ndawo eyakhele uMkhanyakude. Kube yinto eyigugu lethu. Uma sekuphuzwa, aze abekwe ngolimi oluhlukile kuthiwe yiAmarula, abantu bajabule. Kodwa yiwona lawa asuke evele la. Yingakho sithi kubalulekile ukuthi siwasebenzise ukukhulisa umnotho nokulwa nobubha,”
kusho uMnu Zikalala.
Previous articleUNDUNANKULU UTHI BAZOHOLWA NGONDLUNKULU KOLOMKHULEKO WESILO
Next articleUMKHANKASO OMKHULU WOKUPHELA KONYAKA